Waa in la baaro naceybka madowga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Buugaagta Tintin ayaa badanaa lagu edeeyaa in lagu caayo dadka madowga ah. Foto: Claudio Bresciani/Scanpix.
Waa in la baaro naceybka madowga
La daabacay fredag 13 september 2013 kl 14.33
Laga soo bilaabo 2008 waxaa dalkan Iswiidhen boqolkii 24 kordhay falal-denbiyeedka naceybka ee loo geysto dadyowga asalkooda yahay Afrikanka madowga ah, sida ay miijuneyso tirokoobka laga soo xigtey hey’ada ka hortaga faldenbiyeedka Brå. Sida ay werisey shabakada Expo.se
Dhacdadii ugu denbeysey ee noocaan ah waxey axadii la soo dhaafey ka dhacdey magaalada Malmö markaas oo wiil hal sanno iyo bar jir ah aabahiis lagu hor-garaacey.
Hadaba urur la yiraahdo Afrosvenskarnas Forum för Rättvisa ayaa magaalada Malmö sabtida ku dhigi doona isku soo baxa y ku muujinayaan naceybka ka dhanka ah dadyowga madowga ah.
Momdou Jallow waa gudoomiyaha ururkas
- Waxaan qabnaa in waxii dhacey axadii in ay aheyd wax laga caroordo, qatar teed leh oo aan la aqbali karin. Sidas darteed waa in ka hor imaanaa oo muujinaaa in aanan aqbaleynin hab dhaqanka noocaan ah, garaacista noocaan ah , aanan aqbaleynin cunsuriyada iyo afrikan naceybka noocaan ah in ay ka dhacdo bulshadeena dhexdeeda, sidaas darteed waa in aan isku soo baxnaa si aan u muujino in aanan aqbaleynin, ayuu yeri Momodou Jallow gudoomiyaha ururka AfroSvenskarnas Furom för Rättvisa.
Dhacdooyinka naceybka iyo cunsuriyada ka dhanka ah Afrikanka ayaa dalka Iswiidhen kor u kacey boqolkii 24 laga soo bilaabo 2008, sida ay muujineyso tirokoob shabakada dabogasha cunsiyada ee Expo.se ka heshey heyada ka hortaga faldenbiyeedyada Brå. Tusaaleyaasha falaldenbiyeedyada naceybka ku dhisan ee lagula kaco kuwooda aadka caan u noqdey waxaa kamid ah dhacdooyinkii Forserum. Dhacdadaas oo Soomaalida degmadaas ku dhaqan handaad, aflagaado iyo garaacis loogu geystey. Arintaan oo shaac baxdey dayrtii la soo dhaafey. Dhacdo kale oo caan baxdey ayaa aheyd mid ka dhacdey jamacada Lund halkaas oo dad cadaan ah ay ismariyeen midab madow ah kacdiina sisilado isku xireen oo ay iska dhigeen adoon madow ah oo la gadan karo. Dhacdo kale oo madow naceyb ah waa arintii ka dhacey Malmö axadii la soo dhaafey halkaas oo dhowre ku horgaraaceen aabahii ilmo yar oo hal sanno iyo bar jir ah, ayuu yeri Momodou Jallow. Balse falalka madow naceybka ah ka dhanka ah madowga kumo koobna keliya falalka hadadaada iyo aflagaada balse waa cunsuriyed qaabeysan oo dhisan ayuu yeri Momodou Jallow, waxuuna tussale u soo qaatey cunsirinimada ka buuxda suugaanta, gaar ahaan kuwo.
Caruurta cadaanka ah ee ku jirto buugaagta waxaa loo matalaa in ay yahiin kuwo caqli badan oo qurux badan oo amiirayaal ah. Halka caruurta madowga ah ee ku jirta buugaagta ay yahiin kuwo aad u fuul xun oo saweriin ah oo u eg xayewaan ka yimid dal fog. Waana hab fiker noocaas ah wax u baahan in wax laga bedelo ayuu yeri Jollow. Waxuu intaas raaciyey qaabkan suugaanta loogu muujiyo caruurta ay caruurta madowga ah ku cabuureyso coqdad iyo isku kalsooni la’aan.
- Dalkan ayaan ku nool nahey , waxaan nahey Iswiidhiyeen waxaan dooneynaa in ilmaheena ku koraan bulsho ay amni ku heystaan oo ay dareemaan in ay ku qiimo yahiin dadka kale. ’
Momodou Jallow ayaa dowladda ka dalbanaya in ay baaritaan ku sameyso falalka naceybka ka dhanka ah dadyowga madowga ah oo ayna keento xal wax looga qabanayo naceybka dadyowga madow. Waxuu sidoo kale doonayaa in xukumada ay qirto wax la yiraahdo Afrobi in ay ka jirto Iswiidhen. Dalabkaas oo ay ku soo bandhigi doonaan isku soo baxooda
Inkastoo ay jirto tiroobyo rasmiya oo muujinaya in korartey naceybka ka dhanka ah dadyowga asalkooda yahay Afrikaanka madow hadana Jollow Momodou ayaa aaminsan in siiyaasiinta iyo heyaddaha dowligaa ay ka soo qaadaan wax aan jirin. Waxuuse si gooni ah u dhaceeleysan yahay sida ay saxaafada u weriso naceybka ka dhanka ah madowga gaar ahaan dhacadii ugu denbeesey ee ka dahcdey Mamlmö oo ninka ilmahiisa lagu hor garaacey. Waxuu qabaa oo uu qabo in saxaafadu qarisey xog muhiim u ahyed fahamka dhacdadaas.
- Waxaa la qariyey xog muhiim u aheyd fahamka dhacdadas. Aabe ayuu ahaa balse sidoo kale waxuu ahaa Afrikaan.marka meesha laga saaro in uu afrikan ahaa waxaa markaas mugdi la gelinayaa ujeedka faldenbiyeedka. Waayo faldenbiyeedka waxuu ku sabsanaa in uu yahey nin madow ah. Hadii meesha laga saaro in uu yahay madow dadka ma fahmayaan sababta loo garaacey.
- Waxaan qabaa in arintaan tahey qaab dhismeed qarianya naceybka madowga ah ee bulshada ka jira- marka la mudeharaadyo waxaa laga hadla cunsuriyada guud halka laga hadli lahaa naceybka afrikaanka. Marka qof la garaaco waxaa laga hadlayaa in uu ahaa aabe iyo wilkiis halka laga hadli lahaa in uu yahay nin m adow ah. Waana taas mida dhibka ka jiro.